10 Sir Oo Kuu Ekaysiinaya Qof Da'adiisa Saxda Ah Ka Yar Oo Qurux Badan - Daryeel Magazine
10 Sir Oo Kuu Ekaysiinaya Qof Da’adiisa Saxda Ah Ka Yar Oo Qurux Badan
Ma doonaysaa inaad qurux badnaato oo aad ekaato qof da’diisa ka yar markasta? Haday jawaabtu “Haa” tahay fiiro gaar ah u yeelo qodobadaan uu daryeelmagazine.com akhristayaashiisa la wadaagayo.
1. Badso Cunista Khudaarta:
Cunista khudaarta cagaarani faa’idooyin badan ayaa ay u leedahay caafimaadka bani’aadamka, khatar ayayna leedahay in qofku uu ka fogaado cunista khudaarta noocyadeeda. Warka fiicani waa in qofka maalin kasta xaddi khudaar ah cunaa uu ka badbaadayo calaamadaha gabowga oo xitaa waqtigooda caadiga ah ka sii dib dhacaya.
2. Hurda Fiican Seexo: Waxaad weydiisa gabdhaha asxaabtaada ah waxa ay ku qurxiyaan jirkooda waxaa hubaal ah in jawaabta intooda badan ay noqon doonto HURDADA. seexo si aad u qurux badnaato. Hurdada aad si wanaagsan u seexato habeenkii ayaa waxa ay kaa dhigaysaa qof qurux badan. Xusuusnoow ugu yaraan 8 saacadood inaad seexato habeen kasta si aad ugu ekaato qof da’iisa ka yar quruxna aad u hesho.
3. Cab Biyo Badan:
In qofku uu maalin kasta cabbo ugu yaraan laba litir oo biyo iyo dareeraha /sharaabka laga sameeyo dhirta iyo sharaabka kalaba ahi waxa ay saamayn fiican ku leedahay wax-qabadka unuygada maskaxda iyo weliba qaabka muuqaal ee maqaarka. Mar kasta oo ay da’da qofku sii korortana dareeraha oo jirkiisa ku yaraadaa waxa uu hoos u dhigaa awoodaha garasho iyo maskaxeed ee qofka
4. Jimicsi joogto ah:
Cilmi baaris ayaa caddeysay in badanaa dadka jimicsada ka nolol dheeryihiin dadka aan jimicsan, muuqaalka jirkooduna aad uga da’a yaraado. Jimicsiga joogtada ahi waxa uu yareeyaa astaamaha duqoobista sida maqaarka oo kaduud yeesho iyo murqaha uu daciifo.
5. Ka fogow Sigaar Cabbista:
Cabbista sigaarku waxay kordhisaa cimri deg-dega, sigaar cabbistu waa caado u daran caafimaadka waxayna soo dedejisaa gabowga iyo calaamadihiisa.
6. Cun cunto isku dheeli tiran:
waxaa jira faa’iidooyin aad u badan oo laga helo cuntada isku dheeli tiran (balanced diet), marka uu jirku helo dhammaan nafaqada uu u baahan yahay waxaa uu noqdaa jir caafimaad qaba waxaana hoos u dhaca gabowga jirka
7. Maaree Walwalkaaga: Walbahaarku waxa uu ka mid yahay xanuunnada nafsiga ah ee khatarta ku ah caafimaadka maskaxda iyo jirka labadaba. Sidaa awgeed waxaa muhiim ah in qofku uu ku dadaalo in naftiisa uu ka adkaado, mar kastana intii awooddiisa ah yareeyo walwalka iyo walbahaarka uu ka qaadayo arrimaha nolosha ee sida uu jeclaan lahaa u dhici waaya. Haddii uusan qofku sidaa yeelin sida ay khubarada caafimaadku caddeeyeen waxa uu halis u yahay in isaga oo aan weli da’deedii gaarin ay calaamadaha gabowgu dhaqso uga soo if baxaan.
Akhriso: Hababka Maareynta Walbahaarka
8. Ka fogow make-up ka badan:
Xeeldheerayaal ku takhasustay maqaarka oo ka tirsan Jaamacadda California ee dalka Maraykanka ayaa caddeeyay in kiriimada la isku qurxiyo iyo waliba waxyaabaha kale ee koofeeradu ama burkiyeerradu ku qurxiyaan jirka ay ku jiraan maaddooyin marka uu jirku barto soo dedajiya kaduudka iyo calaamadaha muujiya da’da. Sidoo kale waxa uu keenaa in uu qofku qaado Caaro (Allergic) uu maqaarku ka qaado qorraxda una adkaysan kari waayo kulkeeda.
9. Iska Ilaali qorraxda badan:
Qorraxdu aroorta hore iyo galab dhaca in ay jirka ku dhacdaa waxa ay u fiican tahay caafimaadka qofka. Laakiin Laakiin waxaa jira fallaaraha qorraxda kuwo khatar ku ah caafimaadka oo afka qalaad lagu yiraahdo ‘ultra violet rays (UV)’ haddii fallarahani jirka gaaraan waxa keenaan gabowga oo qofka ku soo degdega.
Daawo muuqaalkan hoose:
Cunto Ku Bilaabista Caruurta Yar Yar Qiso Qurux badan Sida Loogu Guulaysto Qalbiga Qof Aan Xiiso Kuu Hayn Sidee Hooyadu U Dhali Kartaa Ilmo Qurux Badan?
Banish dry skin: Top 7 tips for moisturizing during a harsh winter
Alarabiya.net The cold weather can take its toll on our skin. The cold air outside …